Taariikhda My Butros » 4 Tallaabooyinka lagu soo dir First kaamilka Fariinta Naag a
Last updated: Sep. 16 2020 | 4 min akhri
Ma rabtaa in aad qof dumar ah riyooyinkiinna aad marayo shukaansiga online ka heli? Great, waxaad samayn lahaydeen oo dhan waa in la dhiso profile ah mid ka mid ah goobaha badan oo shukaansi online caan ah oo dhex raadiya profiles oo ka mid ah haweenka ka diiwaan gashan.
Kaliya Ha waxaad ka eegi kartaa sawirro ay. Waa ay fiican tahay inaad eegto sawirka aad u qurux badan laakiin haddii aad rabto in aad ogaato haddii aad weeyaan in qofba qofka kale, waa in aad u akhriyaa profile iyo arko haddii aad leedahay danaha isla, hiwaayadaha iyo waxay aaminsan yihiin.
Marka aad ka fiirisay laba qof oo ah profiles oo helay ugu yaraan hal gabar oo aad xiisaynayso, waa waqti si aad u qorto fariin ugu horeeyay iyada. Tani waxay sida caadiga ah waa qayb ka mid ah meesha dadka badankiisu sameeyaan ugu yaraan hal qalad. Arrinta No haddii aad ku dhowdahay gabar online ama offline, laga bilaabo wadahadalka ee sida saxda ah gabi ahaanba waa muhiim.
Waxaad dareemi kartaa xishoon waxa waan u tegayaa inaan hadda idin weydiin, laakiin haddii aad doonaysaan inaad hagaajisid nolosha shukaansi yihiin, Waa in aad ka jawaabto su'aalahan soo socda si daacad ah:
Weligaa ma ku qoran fariin ugu horeysay in gabar ka hor in aad loo isticmaalaa in lagu soo xiriir gabar kale? Waxaa laga yaabaa in aad fariin u eegay sida tan:
Waxaan u lahaa in aad fiiro u profile iyo waxaan qabaa aad si dhab ah u qurux badan.
Haddii aad caadi ahaan u qor fariimaha sida tan, Qasab ma aha in aad la yaabi lahayd sababta dadaalka shukaansiga online aan si gaar ah guul. Waxaad aan caddayn doonaa qof dumar ah oo ay iyada qoraal fariin la mid ah in toban guys kale iyada hor diray.
Si aad u kawadaan Koofurta guushaada shukaansiga online aad qabto in aad naftaada marka laga reebo dhigay Roobkoo ka mid ah dadka had iyo jeer la isticmaalo khadadka isku mid ah iyo fariimaha la mid jaango'an. Marka aad marka laga reebo naftaada u Jeediyey, waxaad yeelan doontaa tartan jirin cidkale.
1. Shakhsiyeeyo Quraanka
Qalad koowaad ayaa in badan oo ka mid ah ragga sameeyaan in la eego shukaansiga online waa in ay xitaa ma maal waqti aad u raadsato magaceeda dhabta ah, ama in ay ugu yaraan shakhsiyeeyo fariinta iyada naaneesta. Dumarka qaar ayaa waxay isugu yeedhaan laga yaabaa "sweet89" laakiin taasi macnaheedu ma aha in aanad ka heli doontaa magaceeda dhabta ah ee iyada shukaansi profile.
Waxaan u arkay wax badan oo ka mid ah profiles shukaansiga online ka mid ah dumarka oo hoos u qoray magacooda dhabta ah meel profile ah, xataa haddii ay magac been abuur ah loo isticmaalo sidii ay naaneesta. By Dadaal si aad u ogaato magaceeda dhabta ah, aad u muujiso in aad u akhriyaa profile. Qaar badan oo ka mid ah dumarka ha u qaadan arrintan u siiyo iyo haddii aad mid ka mid ah guys yar oo dhab daryeeli ku saabsan yihiin in ka badan sawirkeeda, ay si buuxda u la qabsaday yihiin.
Waxa intaa u dheer in, waxaan dadkuba waxay jecel yihiin inay maqlaan magacayaga. Xitaa haddii ay tahay oo kaliya in aad fariin ugu horeeyay, ayay dareemi doonaa xiriir ah ayaa ka xoog dareenka haddii aad iyada wax looga qabto iyada Magaca. Haddii ay dhacdo in aadan ka heli magaceeda dhabta ah, ugu yaraan waa in aad la shakhsiyeeyo aad fariin iyada naaneesta, intii ay u isticmaali generic ah "Hey ".
2. Hambalyeey The Individual
Waa maxay ammaan ugu wanaagsan ee aad siin karto qof dumar ah? Mid ka mid ah in uu yahay mid daacad ah iyo in ay maqlin a million jeer ka hor. Waxay u badan tahay in qof dumar ah oo qurux badan ku ah goobta shukaansiga online aqbaar badan ka helo ka guys.
Fursadda in sare oo dhan ay iyada sheego sida ay u qurux badan iyo cute iyadu waa. Haddii aad tahay oo kaliya nin kale oo line saxda ah isla tobanka guys soo dhaafay qoray iyada ayuu qoray, Waxay u badan tahay, iyadu ma kasayaan. Maxaa dhacaya haddii aad u sheegin in aad u malaynayso in ay tahay qof qurux badan, sababta oo ah indhaha iyada cagaaran eegi saaxiibtinimo iyo iyada dhoola sameeyey aad aad iftiimisid?
Taasi waa wax tobanka guys qoray ka hor iyada oo aan odhan. Siinta qof dumar ah oo bogaadin u gaar ah had iyo jeer waa ka wanaagsan yahay oo wuxuu ku yidhi, alaabtii la mid ah in guys kale mar hore u sheegtay. Waxaa iyada dhab ahaan waxay muujinaysaa sababta aad u soo jiidatay iyada oo aan in boqollaal kale oo ka mid ah haweenka oo sidoo kale sawiro soo jiidasho leh.
3. Waa Waxay Gaarka ah Waa maxay sababta?
Okay, Waan ogahay in aad rabto in aad ha u qoro sababta oo ah waxa aad soo jiidatay iyada, ama ugu yaraan in sawirka ayay ku tusaysaa in iyada profile, laakiin waxa ay yihiin sababaha kale ee aad rabto in aad hesho si ay u ogaadaan iyada? Smile Sorry laakiin fiican ah iyo timaha degay dheer waa in aanay noqon sababaha kaliya sababta aad u rabto in aad hesho si ay u ogaadaan qof dumar ah oo ku saabsan an site shukaansiga online.
Waxay dareemi doonaa gaar ah marka aad bedesho ammaan guud Gala bogaadin shakhsi, laakiin waxay dareemi doonaan xitaa ka fiican marka aad ha u qoro warqaddii sababaha sababta aad daawan jiray, in ay leeyihiin wax ay samayn iyada muuqaalka jirka.
Haddii aad ku darto hal ama laba sababood sababta aad u dooneyso in iyada, in si toos ah la xiriira shakhsiyadda sifooyin iyo hiwaayadaha in ay ku qoran iyada profile, fursadaha aad ku heli jawaab fiican u noqon doonaa mid aad u sarreeya.
Dumarka raba inay dareemaan in jiidasho, laakiin waxa ay sidoo kale doonayaan in ay la kulmaan rag jira kuwaas oo xiisaynaya in ka badan muuqaalka jirkooda. By iyada sheegaya in farriinta aad marka hore in aad xiisaynayso in iyada looks iyo shaqsiyo, marka laga reebo in aad naftaada ka dhan guys ah oo iyada sheego sida ay u qurux badan ayay u yahay, oo aan xitaa ogaanaya xaqiiqda ah in ay ku qoray iyada profile inta ay le'eg ayay u jecel yahay in ay is ogow of dad kale.
4. Sababta aad u Eebaha ee kale ee kasta?
Hadda waxaad ku dhawaad ​​wax walba oo aad u baahan tahay fariin ugu fiican marka hore. Waxaa jira kaliya hal qayb in weli la la'yahay. Waxay og in aad jeceshahay iyada looks iyo shaqsiyo, laakiin aanu ayay sidoo kale ogahay sababta aad u jeceshahay shaqsiyo?
Waa quruxsan cad sababta aad u soo jiita iyada looks laakiin ma aha in cad sababta aad u dooneyso in shaqsiyo. Waxaad dabcan qori kartaa in aad jeclaan xaqiiqada ah in iyadu ay si fiican u safray, laakiin sida ay hubsan kartaa in aad kaliya subagga ma samayn iyada, iyada oo xitaa waxaa la micno ah.
Waxa la soo dhaafay waa inaad samayso si aad u dhammaystirtaan fariin ugu fiican marka hore waa in ay iyada u sheeg sababta aad u jeceshahay iyada hiwaayadaha iyo shaqsiyo. Marka aad iyada u sheegay in aad ku faraxsantahay iyada laabadka safraya, sababtoo ah aad horey u safray dhan ka Asia iyo rabaan in ay u safraan South America sanadka soo socda, iyada Ogaan sababta aad fiican ee midba midka kale.